Xaalada Baladweyne oo saaka degan, iyo Ciidamadii qabsaday oo xalay Bandow ku rogay – SBC
Xaalada Baladweyne oo saaka degan, iyo Ciidamadii qabsaday oo xalay Bandow ku rogay
Posted by Webmaster on January 1, 2012 Comments
Xaalada Magaalada Baladweyne xarunta gobolka Hiiraan ayaa maanta degen ka dib dagaal shalay halkaasi ka dhacay oo ay kula wareegeen gacan ku heynteeda magaaladaas ciidamada DKMG ah ee Soomaaliya iyo Maamulka Dooxada shabeele iyo weliba ciidamo itoobiyaan ah.
Dad goob jooga yaal ah oo la hadlay xafiiska SBC International ee Magaalada Garoowe ayaa u sheegay in xaaladu ay tahay mid degen islamarkaana aysan jirin wax xiisad dagaal ama dhaq dhaqaaqyo laga dhexdareemayo magaalada gudaheeda, inkastoo hareeraha magaalada laga soo sheegayo cabsiyo weerar rogaal celis ah oo markale ay labada dhinac isku qaadaan.
Marka laga yimaado degenaanshaha magaalada Baladweyne, ayaa waxaa habeenimadii xalay halkaasi ka jiray Bandow ay dhinacyada halkaasi qabsaday ay ku soo rogeen xalay Fiidkii ilaa saaka Aroornimadii hore.
Waxaa ay habeenimadii xalay Ciidamada huwanta ah ee qabsaday magaaladaasi in ay gaaf wareegayeen xaafadaha magaaladaas iyo wadooyinka waaweyn iyagoona sameynayay howlgalo aan ilaa iyo haatan la xaqiijin in cid lagu qabqabtay.
Sikastaba ha ahaatee Magaalada Baladweyne ayaa aheyd mudooyinkii ugu dambeeyay meel ay gacanta ku hayaan xoogaga Xarakada Shabaab Almujaahidiin islamarkaana ay ku soo laalaabtay Dagaalo marar hore ay ciidamada DKMG ah iyo kuwa Dooxada shabeele ku soo qaadeen balse ay isaga laabteen, waxaase saraakiisha iminka halkaasi la wareegay ay sheegayaan in tani aytahay mid ka duwan tii hore